China Medical ịwa ahụ Pee breathable uzo teepu emepụta na suppliers | Isi
1. Silk teepu nwere uru nke nro na nkasi obi, ezigbo adhesion na akpụkpọ ahụ na mfe ịkwa;
2. Na-eku ume nke na-enweghị akwa (akwụkwọ) teepu nwere ezigbo ike ike na ọ dịghị mfe imebi;
3. Perforated polyethylene (PE) teepu, dị mfe ịdọta n'ụzọ zuru ezu, dị mfe ịdọka adọka, akwa akwa na-enweghị mgbagwoju anya;
Ihe onwunwe 100% Owu
Ntughari nwa nwoke OZONE
Nha: 1,25 * 910cm
Adị ndụ Afọ 3
Kedu ihe bụ teepu egwuregwu?
The isi ihe nke nyagide teepu bụ ọgwụ na-abụghị kpara ákwà, ọgwụ akwụkwọ, na-agbanwe owu ákwà, larịị owu ákwà, silk ákwà, perforated Pee film na OPP film karị ntekwasa na ọgwụ na ahụ ike na-agbaze mgbali chebaara acrylic ma ọ bụ acrylic mama mejupụtara mejupụtara. A na-ejikarị ya eme ihe iji dozie catheters infusion ma ọ bụ agịga na idozi ejiji mgbe ị na-ekechi ọnya. Enwere ike iji ya maka idozi ihe nkedo dị iche iche.
4. Ngwadogwu acrylic a kwadebere n'ụzọ pụrụ iche nwere nrapado siri ike, nrapado mbụ dị mma, ijigide nrapado na nrapado dị arọ, enweghị mmachi, enweghị ịkpụchasị, dị nro ma dị nro, na enweghị ịkpụcha akpụkpọ ahụ;
5. Otutu nkọwa iji zute odi iche iche ogwu.
Nke gara aga: Compressor nebulizer na OA ISO na FDA
Osote: INSULIN PEN NEEDLE